IFreedomPop isebenza nge-smartphone yakho ye-Android | Izindaba zamagajethi
I-FreedomPop isebenza nge-smartphone yakho ye-Android
InkululekoPop, kulabo abangayazi, inkampani yocingo enikeza ithuba lokukhuluma, ukujabulela ukuxhumana kwedatha yeselula nokunye okuningi ngokuphelele mahhala. Ngokusobala kungenzeka futhi ukuthi ubhalise isilinganiso sokukhokha ngokusebenza okuningi, empeleni kuyashintshashintsha ukumbozwa kwe-Orange ne-Yoigo eSpain. Kodwa-ke, kubonakala sengathi i-FreedomPop ayifuni ukumisa ukukhula kwayo lapha, futhi ihlose ukunikeza enye indlela entsha ngaphandle kokunikeza izinsizakalo kuphela. IFreedomPop isebenza ekwenzeni idivaysi yayo ephathekayo ehlakaniphile uhlelo lwayo lokusebenza olungaba ngaphandle kwe-Android. Ake sibheke ukuthi izici zayo zingaba yini.
Ngokuhambisana nezinye izinqubomgomo zayo zokuthengisa, iFreedomPop isebenza ocingweni oluthi noma ngabe ikuphi lube "yizindleko eziphansi", ngakho-ke ingaheha kalula iningi labasebenzisi bayo. Kodwa-ke, ezinye zezici zayo ziyamangaza ngempela uma kubhekwa inani elizokhuphuka. Mayelana nosayizi wesikrini, okubizwa ngeFreedomPop V7 kuzoba nephaneli engu-5-intshis nobuchwepheshe be-IPS. Ngokugcina sizothola isamba esingu-16GB, lapho kungenzeka khona ukungeza ikhadi le-MicroSD ukuqhubeka nokufaka izinhlelo zokusebenza.
Okwe processor, a I-Snapdragon 210 Ukuphela okuphansi kakhulu, njengakuhlelo lokusebenza, elinye iphuzu elibuthakathaka ukuthi lizonikeza i-Android 6.0 Marshmallow enesici se-Dual-SIM.
Ekhamera sizoba nenzwa engemuva eyi-13 MP esingamazi umenzi wayo, futhi ngaphambili kwe-5 MP yamanye ama-selfies ndawonye. Into ehamba phambili ngaphandle kokungabaza yinani, kufaka phakathi ikhadi leFreedomPop, kubhulogi abamemezele ukuthi lizobiza cishe amaPhawundi angama-57, okulingana cishe nama-euro angama-65. Akungabazeki ukuthi ukuphela kwezindleko eziphansi kakhulu ngoba kuncane kakhulu nge-smartphone ngokungangabazeki engasebenzela abasebenzisi abaqala phansi futhi abangafuni ukuchitha kakhulu. Inkinga kungaba yi-RAM, esingazi umthamo wayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » I-FreedomPop isebenza nge-smartphone yakho ye-Android